? တောက်ပတဲ့အပြုံး ခိုင်မာတဲ့သွားလေးတွေအတွက် ? တောက်ပတဲ့အပြုံး ခိုင်မာတဲ့သွားလေးတွေနဲ့ ကျန်းမာတဲ့ သွားဖုံး ကို အမြဲတမ်း ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆို ? 24/7 Tooth Balance ကို နေ့စဉ်သုံးပါ။ Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးက ဖြူစင်ဝင်းပပြီး သွားချိုး၊ သွားကျောက် ကင်းစင်စေဖို့အတွက် အဆင့် ၄ ဆင့်နဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေးမှာ ပါဝင်တဲ့ Tincture ၃ မျိုးကလဲ သွားဖုံးကို ကောင်းကျိုးများ ပေးပါတယ်။ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် နေ့စဉ်ပုံမှန် အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် သွားဖုံးရောဂါများ၊ သွားပိုးစားခြင်းနဲ့ ခံတွင်းနံ့ ဆိုးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွားရဲ့အသွင်အပြင်ကိုလဲ လှပနှစ်လိုဖွယ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၇,၅၀၀ ကျပ်
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးကြောင့် ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနေလား ? ခံတွင်းအနံ့ဆိုး ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများစွာထဲကမှ သွားဖုံးရောဂါ၊ ခံတွင်းအနာ၊ သွားပိုးပေါက်ရှိခြင်းတို့အတွက် 24/7 Tooth Balance က အသင့်ရှိနေပါတယ်။ 24/7 Tooth Balance မှာ ပါဝင်တဲ့ ? အစွမ်းထက် tincture (၃) မျိုးက သွားဖုံးရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ? Sodium Fluoride က သွားပိုးပေါက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ ? Xylitol က ခံတွင်းရနံ့ကို သင်းပျံနေစေတယ်။ ဒါ့အပြင် သွားရဲ့ အသွင်အပြင်ကို လှပနှစ်လိုဖွယ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ Tooth Balance ကို တစ်နေ့(၂) ကြိမ် အသုံးပြုပြီး ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်လိုက်ပါနော် 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၇,၅၀၀ ကျပ်
စားချင်တာစား ဝါးချင်တာဝါးတဲ့ Foodies တို့အတွက် ? 24/7 Tooth Balance ရှိတယ် ? အစားကြိုက်တဲ့ Foodies တို့ရေ... စားချင်တာစား ဝါးချင်တာဝါး ဖို့အတွက်ဆို ? သွားလေးတွေ ကျန်းမာနေမှ OK မယ်နော် ? 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးကို ပုံမှန် အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် သွားပိုးပေါက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ ? သွားကို ဖြူစင်စေပြီး ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းပေးတယ်။ ? ခံတွင်းနံ့ ကောင်းမွန်စေပြီး သွားပိုးစားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ ? ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွားရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ Gingivitis နှင့် Periodontitis တို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွားရဲ့ အသွင်အပြင်ကို လှပနှစ်လိုဖွယ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လောက်စားစား ? သွားလေးတွေ ကျန်းမာပြီး လှပနေမှာ အသေအချာပဲနော် 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၇,၅၀၀ ကျပ်
24/7 Tooth Balance နဲ့ဆို ရဲရဲဝင့်ဝင့် ပြုံးနိုင်ပြီပေါ့ ?? ? Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးက သွားချိုး၊ သွားကျောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သွားဖုံးရောဂါနှင့် သွားပိုးပေါက်ခြင်းကိုလဲ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွားရဲ့ အသွင်အပြင်ကို လှပနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်လာစေပြီး ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးကာ ခံတွင်းနံ့ သင်းပျံ့စေပါတယ်။ ? 24/7 Tooth Balance နဲ့ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် သွားပုံမှန်တိုက်ပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့်လေး ပြုံးလိုက်ပါနော် 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၇,၅၀၀ ကျပ်
လူကြီး မိဘများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ သွားများ ရရှိစေဖို့ ဂါရဝ လက်ဆောင် ? သီတင်းကျွတ်မှာ လူကြီးမိဘများအတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ စဉ်းစားရခက်နေရင် 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးကို ဂါရဝ လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါစေနော် 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးက သွားများကို ဖြူစင်ဝင်းပပြီး သွားချိုး၊ သွားကျောက် ကင်းစင်တဲ့သွားများကို ရရှိစေပါတယ်။ သွားဖုံးရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပြီး သွားများကို ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ Organic Ingredient များဖြင့်သာ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၇,၅၀၀ ကျပ်
? သွားနဲ့ သွားဖုံး ပြဿနာတွေကို ? 24/7 Tooth Balance နဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်ပါ ? 24/7 Tooth Balance က ? သွားများကို ကျန်းမာဖြူစင်ရုံမကပဲ သွားတိုက်ဆေးမှာ ပါဝင်တဲ့ Tincture (၃) မျိုးက သွားနာခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း၊ ခံတွင်းအမှေးပါးအနာဖြစ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းရောဂါများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ပိုးသတ်ပေးခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုလည်း သက်သာစေပြီး လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်း၊ ခံတွင်းအနာဖြစ်ခြင်း တို့ကိုလဲ ကုသပေးပါတယ်။ ? မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် မှန်မှန် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သွား နဲ့ သွားဖုံး ခံတွင်း ပြဿနာတွေ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော် မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၆,၈၀၀ ကျပ်
သွားနှင့် သွားဖုံး ပိုမိုကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေမယ့် ? 24/7 Tooth Balance ? ? Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးကို ပုံမှန် အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် သွားများ ဖြူစင်ဝင်းပပြီး သွားချိုး၊ သွားကျောက် ကင်းစင်စေပါတယ်။ ? သွားများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေဖို့အတွက် အဆင့် (၄) ဆင့်နဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ သွားတိုက်ဆေးမှာပါဝင်တဲ့ Tincture (၃) မျိုးကလည်း သွားဖုံးရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ မနက် တစ်ကြိမ် ည တစ်ကြိမ် ? 24/7 Tooth Balance ? နဲ့ သွားတိုက်ဖို့ မမေ့နဲ့နော် 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၆,၈၀၀ ကျပ်
? သွားရောဂါများကို အဆင့် (၄) ဆင့်နဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးတယ့် 24/7 Tooth Balance ? 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးက သွားများကို ဖြူစင်ဝင်းပပြီး သွားချိုး၊ သွားကျောက် ကင်းစင်တဲ့သွားတွေ ရရှိစေဖို့အတွက် အဆင့် (၄) ဆင့်နဲ့ ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ ? အဆင့် ၁ Abrasive Silica ဖြင့် သွားချိုး၊ သွားကျောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ? အဆင့် ၂ TSPP (Anhydrous Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Pyrophosphate) ဖြင့် သွားချိုး၊ သွားကျောက်တည်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ? အဆင့် ၃ Sodium Fluoride ဖြင့် သွားပိုးပေါက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ? အဆင့် ၄ အခြားအစွမ်းထက် Tincture3မျိုးဖြင့် သွားဖုံးရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 24/7 Tooth Balance (180g) တစ်ဘူး – ၆,၈၀၀ ကျပ်